Fantaro ny fanabeazan’aizana mety aminao
Mampisy « mycose » ny mipetraka mampisakambina tongotra !
Mandeha ho azy tokoa eo amin’ny vehivavy ny mampisakambina tongotra rehefa mipetraka ambony seza.
Lehilahy te-ho salama : tilio ny aretina!
Na lahy na vavy, na mbola kely na efa lehibe, dia tokony hitandri-tena avokoa mba ho salama tsara. Ho an’ny lehilahy manokana dia misy ireo fihetsika tokony arahina, manomboka amin’ny faha-15 taonany hatramin’ny faha-75 taonany, hisorohana ny fihavian’ireo aretina.
Menaka kinàna : Manasitrana!
Menaka efa ela no nisy teto amintsika, saingy an-kavitsiana no tena mampiasa azy, ny menaka kinàna. Efa entin’ireo olona fahiny mitsabo aretina maro ihany koa anefa izy io. Santionany ireto.
Homamiadan’ny tranon’atodinaina : Tsy misy fambara!
Trangana homamiadana azo sorohina, raha hita taratra mialoha, ny homamiadan’ny tranon’atodinaina. Amin’ny ankapobeny anefa, dia misoko mangina izy io, hany ka mitarika any amin’ny fahafatesana satria tsy voatsabo intsony…
Ady gasy ody kohoka sy sery ho an’ny ankizikely
Manana ilay antsoina hoe « ady gasy » ihany koa isika hitsaboana ireo tsimetimety amin’ny vatana. Araka izay maha-ady gasy azy izay dia nalaina tamin’ny lovan-tsofina izy ireo. Ireto ohatra ny ody kohoka sy sery, rehefa miseho amin’ny ankizikely.
Firafitry ny nify : mety hankarary lamosina !
Mety hankarary ny lamosina ny firafitry ny nify. Tsy hampoizina kanefa tena misy tokoa. Ity no antsoina hoe “scoliose”, hoy ny dokotera.
Maro karazana ny fomba fanabeazan’aizana azo arahina. Samy manana ny singa mandrafitra azy izy ireo.
Ny tsara tsindriana anefa dia tokony hahay hisafidy azy ny vehivavy tsirairay, arakaraky ny toe-batany. Mila hevitry ny dokotera foana ihany kosa anefa mialohan’ny hampiasana azy.
Azo antoka ary mora zaka kokoa, noho ny fanabeazan’aizana hafa, ireo misy tsiry mpanentana “oestrogène” na ireo karazany atao hoe “oestroprogestatives”. Mety hanafoana ny fadim-bolana izy io raha lavalava ny fotoana hampiasana azy. Lesoka kely fotsiny anefa izy ireo mampitombo ny taha mahatonga ny aretim-po sy ny fiakaran’ny tosi-drà. Tsy azon’ireo olona misy tosi-drà, marary fo, na misy “cholesterol” na mifoka sigara atao izy ireny noho izany.
« Progestatifs »
Mety ho an’ny miakatra tosi-drà na manana olana amin’ny lalan-drà ity karazana fanabeazan’aizana ity saingy mitondra vokatra hafa toy ny mony, nono mizihitra, « kyste » amin’ny tranon’atodinaina, volom-bava maniry amin’ny tarehy na tratra …
Tsy misy tsiry mpanentana
Ny fanabeazan’aizana miompana amin’ny tsy fampiasana tsiry mpanentana indray dia azo antoka hatrany amin’ny 98% no sady tsy misy fiantraikany ratsy amin’ny fahasalamana. Ireo karazany hafa toy ny fanisana andro, ny tsy fandefasana ranon’aina any anaty fivaviana... kosa dia tsy ho azo antoka tanteraka satria tsy hilaozan’izay hadisoana kely na rarin-tsaina izay mampikorontana ny tsingerim-bolana.